တခုသောအဟောင်းထဲက အမှတ်တရ | HoLOLo....DiLoLO
All are posted by..
ရက်၊ လ၊ နှစ်
ရေးခဲ့သမျှ Select Month March 2017 (1) February 2017 (1) November 2016 (1) October 2016 (1) September 2016 (2) October 2015 (1) September 2015 (1) July 2015 (2) May 2015 (1) January 2015 (1) December 2014 (3) September 2014 (1) May 2014 (1) January 2014 (3) October 2013 (1) September 2013 (1) June 2013 (1) May 2013 (3) April 2013 (1) January 2013 (4) October 2012 (1) April 2012 (2) January 2012 (2) December 2011 (2) November 2011 (2) October 2011 (5) April 2011 (2) December 2010 (1) November 2010 (3) September 2010 (2) August 2010 (5) June 2010 (3) May 2010 (1) April 2010 (2) March 2010 (5) February 2010 (7) January 2010 (4) November 2009 (1) October 2009 (6) September 2009 (3) August 2009 (7) July 2009 (6) June 2009 (10) May 2009 (5) April 2009 (4) March 2009 (3) February 2009 (8) January 2009 (5) December 2008 (12) November 2008 (10) October 2008 (14) September 2008 (1) August 2008 (5) July 2008 (15) June 2008 (3) April 2008 (5) March 2008 (2) February 2008 (9) January 2008 (7) December 2007 (6) November 2007 (6) October 2007 (4) September 2007 (22)
Bella Hsu Myat on အချစ်ဆိုတာ
Bella Hsu Myat on အမှုမဲ့
hnine on ဒီအရွယ်
အန်တီတင့် on ဒီအရွယ်
BaNyar Shein on ဒီအရွယ်
လုပ်မယ်.. လုပ်မယ်နဲ့.. ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး..
Mandalay Convention Center မှာလုပ်နေတဲ့ Big Bad Wolfစာအုပ်ပွဲသွားတယ်. ကိုယ့်အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့စာအုပ်တွေချည်းဝ… twitter.com/i/web/status/1…2months ago
nothing but tired #train https://t.co/olzUSODRKo 1 year ago
#ryuty #涙そうそう #RyutyLive https://t.co/pQ4XLEJmBR 1 year ago
about me Article Buddhism copy diary experience favourite friend habits idea News picture poem quiz special story thoughts Uncategorized ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
မနေ့က May 7, 2014
KMD Institute မှ Alumni များ၏ အကြံပြုစကားများ။ November 10, 2018
အရှိ ... ... ... July 21, 2010
လူပျင်းမ July 1, 2014
Nothing. Just feelings.
ခုတလော ဘာနက္ခတ်ကြီးစိုးနေတယ် မသိ။ သွားစရာရှိရင်လည်း နှစ်ခု တိုက်နေတယ်။ လုပ်စရာရှိလည်း နှစ်ခုပဲ။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ အချိန်ကိုက်ကို ဖြစ်နေတာလဲ မသိ။ လုပ်စရာ မရှိ၊ သွားစရာ မရှိပြန်ရင်လည်း ဘာမှကို မရှိဘူး။ ဘယ်မှ သွားစရာမရှိလို့ အိမ်မှာနေမယ်ဆိုတော့ အိမ်ထဲနေပြီဆိုတာနဲ့ မီးက စပျက်တာပဲ။
မနေ့ကလည်း စနေလပြည့်အစား တနင်္လာရုံးပြန်ပိတ်ပေးတော့ သွားစရာကမရှိ၊ အိမ်မှာကလည်း တနေကုန်မီးပျက်တဲ့နေ့။ နေ့လည်ရောက်လာတော့ ပျင်းလာရော။ အိမ်ကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ ဖရဲသီးဆိုင်ကိုတောင် စားချင်လျက်နဲ့ နေပူလွန်းလို့ မသွားချင်တာ.. အပြင်ထွက်ဖို့ဆို စိတ်တောင် မကူးဖြစ်ဘူး။ ဒါနဲ့ စာအုပ်ဖတ်ပြန်တော့ မျက်စိရှေ့ရှိနေတာက ရွှေဥဒေါင်း ၀တ္ထုရှည်၎ပုဒ်စုထားတဲ့ စာအုပ်ကြီး။ ဦးစံရှားဝတ္ထုတွေက နဂိုကတည်းက မကြိုက်လှတာမို့ ခဏကြာတော့ ပျင်းလာရော။ သီချင်းနားထောင်ရင် ကောင်းမလား။ နေဦး.. ရှေးဟောင်းပစ္စည်းထုပ်လေးပဲ ဖွရကောင်းမလား။ ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ မထင်ကြပါနဲ့။ ဒိုင်ယာရီအဟောင်းလေးတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ပေးထားတဲ့ အမှတ်တရတွေ၊ မပစ်ရက်တဲ့ ကွိစိကွစိတွေ ထည့်ထားတဲ့ စာအုပ်ထုပ်လေးပါ။ အိုကေ.. အဲဒီစာအုပ်ထုပ်လေး ကိုင်လိုက်ရင် ဒီတညနေတော့ အေးအေးဆေးဆေး ဖြတ်သန်းနိုင်တော့မယ်။ လာလေရော့။
ဒိုင်ယာရီအဟောင်းလေးတွေ ပြန်ဖတ်တော့ ခဏခဏပြုံးမိတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေက လုံးဝမမှတ်မိတော့ဘူး။ တချို့တချို့အဖြစ်အပျက်တွေတော့ ခုထိအသေးစိတ်မှတ်မိသေးတယ်။ တချို့တလေကိုတော့ ၀ိုးတိုးဝါးတား။ သူငယ်ချင်းတွေ ရေးပေးထားတဲ့ စာလေးတွေ ဖတ်တော့လည်း လွမ်းလွန်းလို့ မျက်ရည်ကျချင်ရော။ ကလေးရုပ်လေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ။ နောက် .. ကဗျာတစ်ချို့။ အဲဒီထဲကမှ စိန်ငဂွိပေးထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပြန်တွေ့တယ်။ 2003 Feb ကရေးခဲ့တာဆိုတော့.. အိုး…… ၇နှစ်ကြီးများတောင် ကြာခဲ့ပါပေါ့လား။ သူဘာတွေ ခံစားမိပြီး ရေးထားလဲတော့ မသိဘူး။ နားလည်းမလည်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်.. အမှတ်တရ ဒီမှာ လာတင်ထားလိုက်မယ်။ စိန်ငဂွိတစ်ယောက်လည်း ဘယ်ဆီများရောက်လို့ ဘာတွေလုပ်နေပါလိမ့်….
ငါ့ဦးနှောက်တွေက နင့်ရဲ့ ရက်ကန်းခတ်ဆဲ
memory ထဲက ရုပ်ရှင်ထဲမှာ
ဒါတွေဟာ မက်ချင်တဲ့ အိမ်မက်မဟုတ်ဘူး။
ဓါတ်မှန်ရဲ့ result က
အပြင်းစား အက်ဆစ်နဲ့ မျက်စဉ်းခတ်ကြတယ်
မသင်္ကာတဲ့ FREE လိုင်းပေါ်က
March 2, 2010 by hololodilolo	friend friend